Machinery Shandong Kingoro na -eduzi mgbọ ọkụ
site na nchịkwa na 21-06-23
Nchekwa ọkụ bụ ndụ ndị ọrụ, ndị ọrụ na -ahụ maka nchekwa ọkụ. Ha nwere mmetụta siri ike nke nchekwa ọkụ ma dị mma karịa iwu mgbidi obodo. N'ụtụtụ June 23, Shandong Kingoro Machinery Co., Ltd. wepụtara mgbali mberede nchekwa ọkụ. Nkuzi Li na ...
Kingoro Machinery Co., Ltd. Nzute Obi Ụtọ
site na nchịkwa na 21-06-01
Na Mee 28th, na -eche ikuku ikuku ihu, Kingoro Machinery mepere nzukọ obi ụtọ na isiokwu nke "Fantastic May, Flying Flying". N'oge ọkọchị na -ekpo ọkụ, Gingerui ga -ewetara gị "Oge anwụ" obi ụtọ na mbido mmemme ahụ, onye isi njikwa Sun Ningbo duziri agụmakwụkwọ nchekwa ...
Igwe pellet nke China mere na-abanye Uganda
Igwe pellet nke China mere na-abanye na Uganda Akara: Ngwa Shandong Kingoro: ahịrị nrụpụta pellet 3 560 Ihe ndị dị n'ime ya: ahịhịa, alaka, ogbugbo E gosipụtara ebe nrụnye na Uganda n'okpuru Uganda, mba dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ Afrịka, bụ otu n'ime ndị mepere emepe kacha nta. mba ndị dị n'ụwa ...
Mee ka nrụpụta sie ike -Shandong Kingoro na -ewusi ọzụzụ ọkachamara ọkachamara ike
Ịmụta bụ ihe dị mkpa maka echefughị ​​ebumnuche mbụ, mmụta bụ nkwado dị mkpa maka imezu ebumnuche ahụ, mmụta bụ nkwa dị mma maka ịnagide ihe ịma aka. Na Mee 18, Shandong Kingoro sawdust pellet machine manufacturer held the “202 ...
Ndị ahịa na -eleta ụlọ ọrụ igwe igwe igwe eze
N'ụtụtụ Mọnde, ihu igwe gbachapụrụ agbachapụ, anwụ na -achakwa. Ndị ahịa nyochara igwe pellet biomass bịara ụlọ ọrụ igwe pellet Shandong Kingoro n'oge. Onye njikwa ahịa Huang duru onye ahịa ka ọ gaa n'ụlọ ngosi ihe ngosi igwe pellet yana nkọwa zuru ezu nke usoro pelletizing int ...
Enwere ike iji ahịhịa quinoa dị ka nke a
Quinoa bụ ahịhịa nke mkpụrụ ndụ ihe nketa Chenopodiaceae, nke nwere vitamin, polyphenols, flavonoids, saponins na phytosterols nwere ọtụtụ mmetụta ahụike. Quinoa dịkwa elu na protein, abụba ya nwere 83% nke abụba abụba na -agbasaghị. Ahịhịa quinoa, mkpụrụ, na akwụkwọ niile nwere nnukwu nri nri ...
Ndị ahịa Weihai na -ekiri igwe nnwale igwe pellet ahịhịa wee nye iwu ozugbo
Ndị ahịa abụọ sitere na Weihai, Shandong bịara ụlọ ọrụ iji lelee ma nwalee igwe ahụ, wee nye iwu ebe ahụ. Kedu ihe kpatara igwe eji akụ ahịhịa ahịhịa Gingerui na -eme ka onye ahịa kwekọọ na nlele? Kpọga gị ka ị hụ saịtị igwe nnwale. Ihe nlereanya a bụ igwe pellet ahịhịa 350 nwere ụdị ...
Igwe pellet ahịhịa na -enyere Harbin Ice City aka imeri '' Blue Sky Defense War ''
site na nchịkwa na 21-04-09
N'ihu ụlọ ọrụ na -emepụta ike nke biomass na Fangzheng County, Harbin, ụgbọ ala kwụụrụ n'ahịrị ibuga ahịhịa n'ime osisi. N'ime afọ abụọ gara aga, Fangzheng County, dabere na uru akụ ya, webatara nnukwu ọrụ nke "Straw Pelletizer Biomass Pellets Power Generati ...
site na nchịkwa na 21-04-07
Onye njikwa oge: Ọ nwere onye nwere atụmatụ njikwa ka mma maka ụlọ ọrụ ahụ? Maazị Sun: Mgbe anyị na -agbanwe ụlọ ọrụ, anyị doziri ihe nlereanya ahụ, nke a na -akpọ fission entrepreneurial model. Na 2006, anyị webatara onye nwe obodo mbụ. Enwere mmadụ ise na isii na ụlọ ọrụ Fengyuan w ...
Onye na -akụ osisi, Ogige osisi Chippers, Belt akwagharị Hammer Mill, Nri anụ ụlọ Pellet Mill, Pellet igwe na -eri nri anụmanụ, Igwe egweri N'ihi osisi,